လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ Vote7ဖြိုးဖြတ်အောင် သို့မဟုတ် ပုရစ်တစ်ကောင်ရဲ့အစများ - Tameelay
လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ Vote7ဖြိုးဖြတ်အောင် သို့မဟုတ် ပုရစ်တစ်ကောင်ရဲ့အစများ
ဖြိုးမြတ်အောင်(Vote 7)ကMyanmar idolပေါ်လာမှ ဝင်ပြိုင်ခဲ့သူလား။လူတွေမသိသေးတဲ့ သူရဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်သော အပိုင်းအစများမှာ . . .
Vote 7ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုဖြိုးကအားလပ်ရင်ဖုန်းခေါ်လာတတ်သည်။သူ့မှာလည်းစိုးရိမ်အားငယ်တာတွေရှိတော့ အားပေးရသည်။
“အဆိုတော်လုပ်မှာပဲကွာ ရုပ်ပြစားမှာမှမဟုတ်တာ စိုင်းထီးဆိုင်ကြည့်လေ မျက်မှန်နဲ့သွားခေါကြီးအားလုံးကချစ်တာပဲလေ”ဆယ်တန်းမအောင်တာလည်း သူနောင်တရနေပြီ။
“ရွှေမှုန်ရတီနဲ့အတန်းတူတာပေါ့ကွာ ဆယ်တန်းကျတယ်ပြောတာရိုင်းတယ် အထက်တန်းကျတယ်ပြောရတယ်ကွ တယောဦးတင်ရီလည်းတစ်တန်းမှမအောင်ပါဘူးဇော်ဝင်းထွဋ်ဖြစ်ဖြစ် လေးဖြူ ထူးအိမ်သင်ဖြစ်ဖြစ် ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်ဦးတင်ရီကိုလေးစားရတာပဲ”ကျွန်တော့်မှာ ကြံဖန်နှစ်သိမ့်ရလေသည်။
ဖြိုးမြတ်အောင် idolပြိုင်ဖို့ပုသိမ်ကိုတက်သွားပုံက မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းတစ်ယောက် ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကို မန္တလေးသွားရိုက်ရတာသတိရချင်စရာ။ရန်ကုန်ဘူတာကြီးထဲ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ယောင်ချာချာဖြစ်နေတုန်း အကယ်ဒမီစံရှားတင်စရိတ်ခံခေါ်လို့ သွားဖြစ်ရပုံတွေ သူ့ကိုပြောပြရသည်။
idolပြိုင်ဖို့ ပုသိမ်သွားမယ်ဆိုတော့ ကေးကေး(အလှပြင်ဆိုင်)ဆီက ၁သောင်းချေးသွားရသည်။ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ မနက်လင်းတဲ့အထိ ချေးလို့ငှားလို့မရ။ကိုသားငယ်(တက္ကသိုလ်ထဲမှထမင်းဆိုင်)ကငွေ၂သောင်းချေးတော့မှ ကားဂိတ်ဆင်းရသည်။ပုသိမ်ကားကိုမမှီတော့ သောင်ကြီးကားကိုစီးရသည်။သောင်ကြီးမှရန်ကုန်ပုသိမ်လမ်းသို့ဆိုင်ကယ်ကြုံလိုက်ရသည်။နောက်မှ ပုသိမ်သို့ကားစီး။
အားလုံးကျော့ကျော့မော့မော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေချိန်တွင်ရေတွေစိုရွှဲပြီးရောက်သွားသည်။အဲကွန်းကအေးအဝတ်ပိုကပါမလာ။ကိုမျိုးကျော့က”လူလားကြွက်စုတ်လား”လို့နောက်ပြောင်သည်။မတင်ဇာက”မောင်လေးကိုမနက်ကတည်းကမတွေ့လို့စိတ်ပူနေတာ”တဲ့ဒီလိုအပြောခံရတော့ ရုတ်တရက်ကိုဖြိုးရင်ထဲ နွေးသွားသည်။သီချင်းဆိုချလိုက်တော့ all yes။
ဗမာဂီတာတီးခတ်သူဖခင်နဲ့မြန်မာသီချင်းဆိုသူ မိခင်တို့က သူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့လေသည်။မိဘတွေက အရပ်အဆိုတော်တွေ။ကိုဖြိုးလည်းအသက်၁၄နှစ်(လွန်ခဲ့သော၁၂နှစ်)ကတည်းက မိုက်ကိုင်နေခဲ့ပြီ။မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အလှူပွဲတွေ တန်ဆောင်တိုင်တွေ ပရဟိတပွဲတွေမှာ ၁၄နှစ်သားလေးသီချင်းလိုက်ဆိုနေခဲ့သည်။မိခင်ရဲ့မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ကို ကူညီတာကလွဲရင် ဘာမှမလုပ်ခဲ့။ဂီတကိုသာရူးသွပ်နေခဲ့သည်။ကိုစံကွမ်းတို့ လွင်မင်းထက်တို့ Nextbandနဲ့တွဲမိသည်။ပွဲရှိရင်ဂစ်တာတွေတီးဝိုင်းပစ္စည်းတွေသယ်ပေး စင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်ပေး ဆိုခွင့်ရရင်ဆို။
ရန်ကုန်အဆိုတော်ကြီးတွေလာရင် ဘီယာစီးကရက်ဝယ်ပေး။သူ့အတွက်စင်နောက်မှာ ထိုင်စရာခုံရယ်လို့မရှိ။သီချင်းဆိုခ မရတာများသည်။၅ထောင်၁သောင်း ရတဲ့အခါရသည်။တစ်ခုတော့ရှိသည်။သူသီချင်းဆိုတာကြားသွားရင်တော့ ရန်ကုန်အဆိုတော်ကြီးတွေ ချီးမွမ်းသွားကြသည်သာ။နောက်တော့ရန်ကုန်အဆိုတော်ကြီးတွေ ဟင်္သာတရောက်တိုင်း. .”ပုရစ်ဘယ်မှာလဲ ပုရစ်နဲ့တွေ့ချင်တယ်”ဖြစ်လာသည်။ပုရစ်ဆိုသည်မှာအကောင်သေးသော်လည်း အသံကျယ်တဲ့သဘော။မေခလာပေးသွားသောနာမည်။
မှတ်မှတ်ရရပြောစရာတစ်ခုက စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆိုနေတုန်း စတိတ်စင်အခြေအနေမကောင်းလို့စင်အောက်မှာဝင်ထမ်းရဖူးသည်။စင်ပြိုကျသွားလို့ စိုင်းစိုင်းနဲ့သူ့ကို အပျက်အစီးတွေကြားက ဆွဲထုတ်ရဖူးလေသည်။
၂၀၁၅လောက်က သူငယ်ချင်းယူဇောရဲ့Generalအောင်ဆန်းကို ဂစ်တာတီးဆိုပြီး fbပေါ်တင်လိုက်သည်။ထိုသီချင်းကိုအကြောင်းပြုလို့တေးရေး နာနိူပိစ်(Nano peace)သူ့ကိုဆက်သွယ်လာသည်။နာနိူပိစ်တို့ Doron music bandက ရန်ကုန်မှာ။ Lead အကမ်း Bass အဘမ်း KB ကိုမုန်ယီးတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားသော ခရစ်ယာန်လူငယ်တွေရဲ့bandလေး။ကိုဖြိုးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမယ့် ဂီတမှာလူမျိုးဘာသာမရှိဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုယ်စီနဲ့ Doronနဲ့ကိုဖြိုး မြင်မြင်ချင်းရင်းနှီးနွေးထွေးသွားလေသည်Generalအောင်ဆန်းကို သေချာarrgementပြန်လုပ်ပြန်ဆိုဖို့ တိုင်ပင်ကြတော့သည်။
ကိုဖြိုးမှာ၂၀၁၆ရောက်မှသာ ရန်ကုန်ကိုပထမဆုံး ရောက်ဖူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သူငယ်ချင်း ခန့်မင်းထက်(သူကြီး)က၁သိန်း ပြည့်ဖြိုးကျော်က၅သောင်း ပေးသည်။ချောင်းဝကmusic houseစတူဒီယိုမှာGeneralအောင်ဆန်းကို ပြန်ဆိုပြန်တီးပြီးလိုင်းပေါ်တင်လိုက်သည်။like share Kပေါင်းများစွာရလာသည်။General အောင်ဆန်းမှာ အရင်ခေတ်ကဂျေးအောင်းရနိူင်သော်လည်းNLDခေတ်မှာ မျက်နှာပန်းအလွန်လှခဲ့သည်။ပြည်တွင်းပြည်ပဆုတော်ငွေတွေ ချီးမြှင့်ကြလေသည်။
ရလာတဲ့ပိုက်ဆံကိုရင်းပြီးMTVတစ်ပုဒ် ထပ်လုပ်ဖို့ အားလုံးသဘောတူကြသည်။တေးရေးနာနိုပိစ်ရဲ့ လူပဲအတူတူပဲ သီချင်းကိုရိုက်ကြသည်။MTVမှာ ခုပ်ပီးနဲ့ဖြိုးမြတ်အောင်ကအဆို အကမ်းကဂစ်တာနဲ့။တီးခတ်သူတွေကDoron အဖွဲ့။
“အဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုခုပ်ပီးကကျွန်တော့်ဆရာပါ ကိုစုရယ်”တဲ့
ထိုရက်များတွင် ခုပ်ပီးရှိရာသုခသို့ သမိုင်းလမ်းဆုံမှ မနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်လာရသည်။ကျွန်တော်က. .
“မင်းကဇာတ်နာအောင် ပြောနေသလိုပဲ” “တကယ်ပါအစ်ကိုရာ လမ်းစရိတ်တောင်မရှိတာပါ”လမ်းလျှောက်ရင်း Bon Joviရဲ့Blaze of Gloryကို ဂါထာလိုရွတ်ခဲ့ရသောVite 7ရဲ့နေ့များ။
MTVကိုလိုင်းပေါ်တင်လိုက်ရာ သိပ်မပေါက်။ရှိသမျှပလုံသွားပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ရလို့တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ကြရသည်။
ရန်ကုန်အဆိုတော်ကြီးတွေကလည်း ဟင်္သာတရောက်ရင်သာ ပုရစ်ကိုမေးတတ်ရှာတတ်တာ။ရန်ကုန်မှာက အချိန်ပေးနိူင်သူမရှိလို့ သွားမတွေ့တော့။ကိုဂျေကြီး(Jမောင်မောင်)တစ်ယောက်သာတွေ့တိုင်းထမင်းကျွေး လက်ဖက်ရည်တိုက် ဂီတလောကအကြောင်းတွေပြောပြတတ်သည်။၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံး ဟင်္သာတရန်ကုန် သွားလိုက်ပြန်လိုက် undergoundဘဝနဲ့ယောင်လည်လည်။ပရိုဂျူဆာတချို့နဲ့စကားပြောခွင့်ရပေမယ့် ကီးမကိုက်ကြ။ကိုဖြိုးကလည်း ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင် မာနကြီးတတ်သူ။”ရင်ထဲမှာလည်း နာကျည်းချက်တချို့ရှိနေပြီကိုစုရာ”
ထိုအချိန်များတွင် ကျွန်တော်ရေးဖူးတဲ့ကဗျာစာသားအပိုင်းအစတစ်ခုက သူ့အတွက်ရည်စူးထားသလိုခံစားရပါသည်တဲ့. .. . .”မြို့ကလေးက ကမာကောင်ပုလဲတစ်လုံးကို မျိုထားသလိုမျိုးမကြာခင် ကမ္ဘာကျော်တော့မယ့် လူတစ်ယောက်ကို မျိုထားလေရဲ့”ဆိုတဲ့စာသား။
ဤသို့ဖြင့် ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိချိန် Myanmar idolကနေဝင်ပြိုင်ဖို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“ကျွန်တော်သာ ပိုက်ဆံရှိရင်ဝင်မပြိုင်ဘူး ခွေတန်း ထုတ်မှာ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာအစ်ကိုရေ”တဲ့
idolကို အမှန်အကန်လို့သူယုံကြည်သည်။idol တာဝန်ရှိသူတွေက အစစအရာရာလိုလေသေးမရှိကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။အားလုံးမိသားစုလို။”အပြင်မှာပြောနေတာတွေက တစ်မျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ကျွန်တော်ကလက်တွေ့လေ idolကတရားမျှတတယ် ကျောသားရင်သားမခွဲဘူး”
အခုတော့မနက်၇နာရီstar cityမှ ရွှေထွဋ်တင်သွား။သီချင်းကျင့် ရိုက်ကူးရေးလုပ်။မအားလပ်တော့ပြီ။သူပြောလေ့ရှိသော စကားက”အားလုံးရင်ထဲ တင်ကျန်မယ့်သီချင်းတွေဖန်တီးချင်တယ်” ဆိုတာပဲ။
Vote 7ဖြိုးမြတ်အောင်ကား ဂီတကိုသာမန်ပေါ်ပင်ဝင်လုပ်သူမဟုတ်။(လုံးဝမဟုတ်)နှစ်နှစ်ကာကာရူးသွပ်မှုရှိသောRock Metal တစ်ယောက်ဆိုတာသေချာလှပေသည်။ဦးသိန်းတန်ဆွဲထုတ်လာတဲ့king ဖဲအစစ်။
ဒီည ၂၁.၆.၁၈ ည ၉း၀၀နာရီlive
ကြိုးစားသူတစ်ယောက်အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေစောင့်ကြိုနေပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်က တတ်အားသမျှVoteလုပ်ပေးပါမည်။သင်ရော . . . .
(ဟင်္သာတသူ/သားတွေshare copy လုပ်နိူင်ပါကြောင်း)
(နောက်တဆင့်မှ ဆက်ရေးမယ်ကိုဖြိုးရေ. .)
လူတိုငျးမသိသေးတဲ့ Vote7ဖွိုးဖွတျအောငျ သို့မဟုတျ ပုရဈတဈကောငျရဲ့အစမြား
ဖွိုးမွတျအောငျ(Vote 7)ကMyanmar idolပျေါလာမှ ဝငျပွိုငျခဲ့သူလား။လူတှမေသိသေးတဲ့ သူရဲ့ဂီတနဲ့ပတျသကျသော အပိုငျးအစမြားမှာ . . .
Vote 7ဖွဈသှားပွီးနောကျပိုငျး ကိုဖွိုးကအားလပျရငျဖုနျးချေါလာတတျသညျ။သူ့မှာလညျးစိုးရိမျအားငယျတာတှရှေိတော့ အားပေးရသညျ။
“အဆိုတျောလုပျမှာပဲကှာ ရုပျပွစားမှာမှမဟုတျတာ စိုငျးထီးဆိုငျကွညျ့လေ မကျြမှနျနဲ့သှားခေါကွီးအားလုံးကခဈြတာပဲလေ”ဆယျတနျးမအောငျတာလညျး သူနောငျတရနပွေီ။
“ရှမှေုနျရတီနဲ့အတနျးတူတာပေါ့ကှာ ဆယျတနျးကတြယျပွောတာရိုငျးတယျ အထကျတနျးကတြယျပွောရတယျကှ တယောဦးတငျရီလညျးတဈတနျးမှမအောငျပါဘူးဇျောဝငျးထှဋျဖွဈဖွဈ လေးဖွူ ထူးအိမျသငျဖွဈဖွဈ ဂီတနဲ့ပတျသကျရငျဦးတငျရီကိုလေးစားရတာပဲ”ကြှနျတေျာ့မှာ ကွံဖနျနှဈသိမျ့ရလသေညျ။
ဖွိုးမွတျအောငျ idolပွိုငျဖို့ပုသိမျကိုတကျသှားပုံက မငျးသားကွီးကြျောဟိနျးတဈယောကျ ပထမဆုံးရုပျရှငျကို မန်တလေးသှားရိုကျရတာသတိရခငျြစရာ။ရနျကုနျဘူတာကွီးထဲ လမျးစရိတျမရှိလို့ယောငျခြာခြာဖွဈနတေုနျး အကယျဒမီစံရှားတငျစရိတျခံချေါလို့ သှားဖွဈရပုံတှေ သူ့ကိုပွောပွရသညျ။
idolပွိုငျဖို့ ပုသိမျသှားမယျဆိုတော့ ကေးကေး(အလှပွငျဆိုငျ)ဆီက ၁သောငျးခြေးသှားရသညျ။ဒုတိယတဈခေါကျမှာတော့ မနကျလငျးတဲ့အထိ ခြေးလို့ငှားလို့မရ။ကိုသားငယျ(တက်ကသိုလျထဲမှထမငျးဆိုငျ)ကငှေ၂သောငျးခြေးတော့မှ ကားဂိတျဆငျးရသညျ။ပုသိမျကားကိုမမှီတော့ သောငျကွီးကားကိုစီးရသညျ။သောငျကွီးမှရနျကုနျပုသိမျလမျးသို့ဆိုငျကယျကွုံလိုကျရသညျ။နောကျမှ ပုသိမျသို့ကားစီး။
အားလုံးကြော့ကြော့မော့မော့ပွိုငျပှဲဝငျနခြေိနျတှငျရတှေစေိုရှဲပွီးရောကျသှားသညျ။အဲကှနျးကအေးအဝတျပိုကပါမလာ။ကိုမြိုးကြော့က”လူလားကွှကျစုတျလား”လို့နောကျပွောငျသညျ။မတငျဇာက”မောငျလေးကိုမနကျကတညျးကမတှလေို့စိတျပူနတော”တဲ့ဒီလိုအပွောခံရတော့ ရုတျတရကျကိုဖွိုးရငျထဲ နှေးသှားသညျ။သီခငျြးဆိုခလြိုကျတော့ all yes။
ဗမာဂီတာတီးခတျသူဖခငျနဲ့မွနျမာသီခငျြးဆိုသူ မိခငျတို့က သူတို့မောငျနှမ၃ယောကျကိုမှေးဖှားခဲ့လသေညျ။မိဘတှကေ အရပျအဆိုတျေျာတှေ။ကိုဖွိုးလညျးအသကျ၁၄နှဈ(လှနျခဲ့သော၁၂နှဈ)ကတညျးက မိုကျကိုငျနခေဲ့ပွီ။မွဈဝကြှနျးပျေါဒသေ အလှူပှဲတှေ တနျဆောငျတိုငျတှေ ပရဟိတပှဲတှမှော ၁၄နှဈသားလေးသီခငျြးလိုကျဆိုနခေဲ့သညျ။မိခငျရဲ့မုနျ့ဟငျးခါးဆိုငျကို ကူညီတာကလှဲရငျ ဘာမှမလုပျခဲ့။ဂီတကိုသာရူးသှပျနခေဲ့သညျ။ကိုစံကှမျးတို့ လှငျမငျးထကျတို့ Nextbandနဲ့တှဲမိသညျ။ပှဲရှိရငျဂဈတာတှတေီးဝိုငျးပစ်စညျးတှသေယျပေး စငျပျေါမှာပွငျဆငျပေး ဆိုခှငျ့ရရငျဆို။
ရနျကုနျအဆိုတျောကွီးတှလောရငျ ဘီယာစီးကရကျဝယျပေး။သူ့အတှကျစငျနောကျမှာ ထိုငျစရာခုံရယျလို့မရှိ။သီခငျြးဆိုခ မရတာမြားသညျ။၅ထောငျ၁သောငျး ရတဲ့အခါရသညျ။တဈခုတော့ရှိသညျ။သူသီခငျြးဆိုတာကွားသှားရငျတော့ ရနျကုနျအဆိုတျောကွီးတှေ ခြီးမှမျးသှားကွသညျသာ။နောကျတော့ရနျကုနျအဆိုတျောကွီးတှေ ဟင်ျသာတရောကျတိုငျး. .”ပုရဈဘယျမှာလဲ ပုရဈနဲ့တှခေ့ငျြတယျ”ဖွဈလာသညျ။ပုရဈဆိုသညျမှာအကောငျသေးသျောလညျး အသံကယျြတဲ့သဘော။မခေလာပေးသှားသောနာမညျ။
မှတျမှတျရရပွောစရာတဈခုက စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျဆိုနတေုနျး စတိတျစငျအခွအေနမေကောငျးလို့စငျအောကျမှာဝငျထမျးရဖူးသညျ။စငျပွိုကသြှားလို့ စိုငျးစိုငျးနဲ့သူ့ကို အပကျြအစီးတှကွေားက ဆှဲထုတျရဖူးလသေညျ။
၂၀၁၅လောကျက သူငယျခငျြးယူဇောရဲ့Generalအောငျဆနျးကို ဂဈတာတီးဆိုပွီး fbပျေါတငျလိုကျသညျ။ထိုသီခငျြးကိုအကွောငျးပွုလို့တေးရေး နာနိူပိဈ(Nano peace)သူ့ကိုဆကျသှယျလာသညျ။နာနိူပိဈတို့ Doron music bandက ရနျကုနျမှာ။ Lead အကမျး Bass အဘမျး KB ကိုမုနျယီးတို့နဲ့ဖှဲ့စညျးထားသော ခရဈယာနျလူငယျတှရေဲ့bandလေး။ကိုဖွိုးကဗုဒ်ဓဘာသာဖွဈပမေယျ့ ဂီတမှာလူမြိုးဘာသာမရှိဆိုတဲ့ခံယူခကျြကိုယျစီနဲ့ Doronနဲ့ကိုဖွိုး မွငျမွငျခငျြးရငျးနှီးနှေးထှေးသှားလသေညျGeneralအောငျဆနျးကို သခြောarrgementပွနျလုပျပွနျဆိုဖို့ တိုငျပငျကွတော့သညျ။
ကိုဖွိုးမှာ၂၀၁၆ရောကျမှသာ ရနျကုနျကိုပထမဆုံး ရောကျဖူးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။သူငယျခငျြး ခနျ့မငျးထကျ(သူကွီး)က၁သိနျး ပွညျ့ဖွိုးကြျောက၅သောငျး ပေးသညျ။ခြောငျးဝကmusic houseစတူဒီယိုမှာGeneralအောငျဆနျးကို ပွနျဆိုပွနျတီးပွီးလိုငျးပျေါတငျလိုကျသညျ။like share Kပေါငျးမြားစှာရလာသညျ။General အောငျဆနျးမှာ အရငျခတျေကဂြေးအောငျးရနိူငျသျောလညျးNLDခတျေမှာ မကျြနှာပနျးအလှနျလှခဲ့သညျ။ပွညျတှငျးပွညျပဆုတျောငှတှေေ ခြီးမွှငျ့ကွလသေညျ။
ရလာတဲ့ပိုကျဆံကိုရငျးပွီးMTVတဈပုဒျ ထပျလုပျဖို့ အားလုံးသဘောတူကွသညျ။တေးရေးနာနိုပိဈရဲ့ လူပဲအတူတူပဲ သီခငျြးကိုရိုကျကွသညျ။MTVမှာ ခုပျပီးနဲ့ဖွိုးမွတျအောငျကအဆို အကမျးကဂဈတာနဲ့။တီးခတျသူတှကေDoron အဖှဲ့။
“အဆိုနဲ့ပတျသကျရငျ ကိုခုပျပီးကကြှနျတေျာ့ဆရာပါ ကိုစုရယျ”တဲ့
ထိုရကျမြားတှငျ ခုပျပီးရှိရာသုခသို့ သမိုငျးလမျးဆုံမှ မနကျတိုငျးလမျးလြှောကျလာရသညျ။ကြှနျတျောက. .
“မငျးကဇာတျနာအောငျ ပွောနသေလိုပဲ” “တကယျပါအဈကိုရာ လမျးစရိတျတောငျမရှိတာပါ”လမျးလြှောကျရငျး Bon Joviရဲ့Blaze of Gloryကို ဂါထာလိုရှတျခဲ့ရသောVite 7ရဲ့နမြေ့ား။
MTVကိုလိုငျးပျေါတငျလိုကျရာ သိပျမပေါကျ။ရှိသမြှပလုံသှားပမေယျ့ ကိုယျလုပျခငျြတာလုပျလိုကျရလို့တဈဖှဲ့လုံးပြျောကွရသညျ။
ရနျကုနျအဆိုတျောကွီးတှကေလညျး ဟင်ျသာတရောကျရငျသာ ပုရဈကိုမေးတတျရှာတတျတာ။ရနျကုနျမှာက အခြိနျပေးနိူငျသူမရှိလို့ သှားမတှတေ့ော့။ကိုဂကြွေီး(Jမောငျမောငျ)တဈယောကျသာတှတေို့ငျးထမငျးကြှေး လကျဖကျရညျတိုကျ ဂီတလောကအကွောငျးတှပွေောပွတတျသညျ။၂၀၁၇ တဈနှဈလုံး ဟင်ျသာတရနျကုနျ သှားလိုကျပွနျလိုကျ undergoundဘဝနဲ့ယောငျလညျလညျ။ပရိုဂြူဆာတခြို့နဲ့စကားပွောခှငျ့ရပမေယျ့ ကီးမကိုကျကွ။ကိုဖွိုးကလညျး ဂီတနဲ့ပတျသကျရငျ မာနကွီးတတျသူ။”ရငျထဲမှာလညျး နာကညျြးခကျြတခြို့ရှိနပွေီကိုစုရာ”
ထိုအခြိနျမြားတှငျ ကြှနျတျောရေးဖူးတဲ့ကဗြာစာသားအပိုငျးအစတဈခုက သူ့အတှကျရညျစူးထားသလိုခံစားရပါသညျတဲ့. .. . .”မွို့ကလေးက ကမာကောငျပုလဲတဈလုံးကို မြိုထားသလိုမြိုးမကွာခငျ ကမ်ဘာကြျောတော့မယျ့ လူတဈယောကျကို မြိုထားလရေဲ့”ဆိုတဲ့စာသား။
ဤသို့ဖွငျ့ ဘာဆကျလုပျရမှနျးမသိခြိနျ Myanmar idolကနဝေငျပွိုငျဖို့ သူဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။
“ကြှနျတျောသာ ပိုကျဆံရှိရငျဝငျမပွိုငျဘူး ခှတေနျး ထုတျမှာ ပိုကျဆံမရှိလို့ ဝငျပွိုငျခဲ့တာအဈကိုရေ”တဲ့
idolကို အမှနျအကနျလို့သူယုံကွညျသညျ။idol တာဝနျရှိသူတှကေ အစစအရာရာလိုလသေေးမရှိကူညီဆောငျရှကျပေးကွသညျ။အားလုံးမိသားစုလို။”အပွငျမှာပွောနတောတှကေ တဈမြိုးဖွဈခငျြဖွဈမယျ ကြှနျတျောကလကျတှလေ့ေ idolကတရားမြှတတယျ ကြောသားရငျသားမခှဲဘူး”
အခုတော့မနကျရနာရီstar cityမှ ရှထှေဋျတငျသှား။သီခငျြးကငျြ့ ရိုကျကူးရေးလုပျ။မအားလပျတော့ပွီ။သူပွောလရှေိ့သော စကားက”အားလုံးရငျထဲ တငျကနျြမယျ့သီခငျြးတှဖေနျတီးခငျြတယျ” ဆိုတာပဲ။
Vote 7ဖွိုးမွတျအောငျကား ဂီတကိုသာမနျပျေါပငျဝငျလုပျသူမဟုတျ။(လုံးဝမဟုတျ)နှဈနှဈကာကာရူးသှပျမှုရှိသောRock Metal တဈယောကျဆိုတာသခြောလှပသေညျ။ဦးသိနျးတနျဆှဲထုတျလာတဲ့king ဖဲအစဈ။
ဒီည ၂၁.၆.၁၈ ည ၉းဝဝနာရီlive
ကွိုးစားသူတဈယောကျအတှကျကံကောငျးခွငျးတှစေောငျ့ကွိုနပေါစလေို့ ဆုတောငျးရငျးကြှနျတျောက တတျအားသမြှVoteလုပျပေးပါမညျ။သငျရော . . . .
(ဟင်ျသာတသူ/သားတှေshare copy လုပျနိူငျပါကွောငျး)
(နောကျတဆငျ့မှ ဆကျရေးမယျကိုဖွိုးရေ. .)
ပိုးမီရဲ့သီချင်းကို ပြန်သီဆိုထားတဲ့ ဆရာမလေး (ကောင်းလိုက်တဲ့အသံဗျာ)
ယနေ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ ဆရာမလေးတစ်ယောက်သီဆိုထားတဲ့ အလိုက်တသိ သီချင်းဟာ အင်မတန်ကို ခေတ်စားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အလိုက်တသိ သီချင်းဟာ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင် ပိုးမီရဲ့ သီချင်းဖြစ်ပြီးတော့ ပိုးမီသီဆိုထားတဲ့အချိန်မှာလည်း ပ၇ိသတ်တွေကြားအရမ်းကိုပေါက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမီရဲ့ အလိုက်တသိ သီချင်းလေးကို ဆရာမလေးတစ်ဦးက ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့ သီဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသံနေအသံထားကြောင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ တစ်ခဏလေးအတွင်း …
သက်မွန်တို့အိမ်ကို လည်လည်သွားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်များ
ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးချော်လေး ခင်လေးနွယ်ကတော့ တစ်ရက်တစ်ခြားလှပလို့နေပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်တဲ့သူမကတော့ အမြဲလိုလို စမက်ကျကျရှိနေပြီးစွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ခင်လေးနွယ်အပါအဝင်အခြားအနုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ဖူးစုံရယ်မိုးပြည့်ပြည့်မောင်တို့နဲ့အခြားသောအနုပညာရှင်တွေလည်းသက်မွန်တို့အိမ်ကိုသွားရောက်လည်ပက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အနုပညာမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ သူမတို့ကတော့ တကယ့်ကို တက်ညီလက်ညီပါပဲ။ ခင်လေးကတော့ သက်မွန်တို့အိမ်မှာ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့”မွန်မွန့် အိမ်သစ်မှာ သွားရောက်စားသောက်ဓါတ်ဖမ်းခဲ့ပါကြောင်း”ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
အမေဖြူပြီး သားကဘာလို့ မဲနေရတာလဲ ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အဆိုတော် စိုးပြည့်ပြည့်စံ
အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်ပြည့်စံဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားဦးလေးကိုမွေးထားပြီး သူမဟာ အသားဖြူသလောက် သားလေးဟာ ထင်မထားရလောက်အောင် အသားညိုမဲနေတာကြောင့် ပရိသတ်တစ်ချို့ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သားလေး ခုလို အသားညိုနေရခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မှာ သောက်သုံးခဲ့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကြောင့်ရယ် မွေးဖွားပြီးချိန်မှာ သောက်သုံးခဲ့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကြောင့် …